Mandroso Amin’ny Asany Ireo Vehivavy Mpikorisa Ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2017 6:48 GMT
Fitetezantany Fikorisana ho an'ny Tovovavy taona 2016. Pikantsary avy amin'ny lahatsary Vimeo.
Nandrava ny sakana napetraky ny fiarahamonina Indiana ho an'ny vehivavy sy ny tovovavy ny vondrom-piarahamonin'ny vehivavy ao Kovalam, tanàna kely amorontsiraka ao atsimon'ny firenena India, Kerala. Tarihin'ilay mpikorisa voalohany tao India, Atita Verghese, mamita andraikitra mba hanasongadina, hampifandray sy hampitombo ny isan'ny vehivavy mpikorisa ao India ny Girl Skate India ary nahazo fankasitrahana iraisampirenena marobe hatramin'izao.
Nanazava ny antony nahasarika azy tamin'ity fanatanjahantena ity tamin'ny resadresaka TEDxPESITBSC i Atita Verghese. Latsa-pitiavana tamin'ny fikorisana izy raha vao 19 taona monja, saingy tsy nanana hazo fikorisana azy manokana. Nanatevin-daharana ny fikambanana tao Bangalore antsoina hoe Holystoked izy ary nanapa-kevitra fa te hitondra tovovavy maromaro amin'ny fikorisana. Amin'ny fomba fijeriny, tsy mitarika ny tovovavy amin'ny atletisma ihany ny fikorisana, fa mampianatra ihany koa ny fikirizana, ny asa ifarimbonana, ny fahatokisana, ny fahaizana madanjalanja, ny fandrindrana sy ny faharetana, “zavatra afaka manampy ny vehivavy mba hatanjaka ara-tsaina sy ara-batana izany”.
Tamin'ny taona 2013, nanangana vala fikorisana tao Bengaluru tamin'ny fanampian'ny Fikambanana HolyStoked i Atita sy ny namany, ary nanomboka nampianatra momba ny fikorisana ho an'ireo ankizy sahirana. Nanangana ny Girl Skate India izy nony farany— fisantarana andraikitra mampianatra ireo tovovavy mikasika ny fikorisana, mampiroborobo ny fitovian-jòn'ny lahy sy ny vavy sy manasongadina ireo vehivavy mpikorisa mahavelom-panantenana ao India. Miara-miasa amin'ny Holystoked ny Girl Skate India mba hampianatra ireo tovovavy sy hanokatra ny vala fikorisana ho an'ny rehetra.
Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny Girls Are Awesome (Mahafinaritra ny Tovovavy), naneho hevitra momba ny ezaka nataony amin'ny fitondrana tovovavy maromaro hanao fanatanjahantena i Atita.
Tiako ho hita maso fa nisy ireo tovovavy mpikorisa ao India, na dia azo nisaina tamin'ny ratsa-tanana iray aza ny isan'ireo tamin'izany fotoana izany. Nanomboka niresaka tamin'ireo ray aman-dreny aho mba hitondra ny zanak'izy ireo amin'ny fikorisana sy handray anjara amin'ny hetsika antserasera.
Zava-dehibe ny asan'ny ekipan'i Atita satria laharana faha-136 amin'ireo firenena miisa 186 tamin'ny tondro momba ny hantsana eo amin'ny lahy sy vavy avy amin'ny Firenena Mikambana no misy an'i India (2014).
Ity no iray amin'ireo sary ankafizinay hatramin'izao tao amin'ny tanàna kely ahitana ny iray amin'ireo vala fikorisana tsara indrindra ao India – @janwaarcastle. Tovovavy falifaly mifanohana eny amin'ny hazo sy ivelany ❤🌞 #girlgang #thankyouskateboarding
Nahavita ny fitetezantany voalohany amin'ny fikorisana ho an'ny tovovavy rehetra ao India ny ekipa Girl Skate India tamin'ny 15 Desambra 2015, izay nitsidika toerana efatra tao India — Bengalore, Goa, Kovalam (Tamil Nadu) sy Hampi (Karnataka) — ary nahitana fandraisana anjaran'ireo vehivavy mpikorisa an-dranomandry miisa 12 avy amin'ny firenena sivy samihafa.
Nahazo aingam-panahy tamin'ny fahombiazany. Niditra tamin'ny dia maharitra 15 andro miaraka amin'ireo vehivavy mpikorisa miisa 13 avy amin'ny firenena sivy samihafa Bengalore, Kovalam, Goa sy Hampi i Atita sy ny ekipa Girl Skate India tamin'ny volana Desambra 2016. Nitarika ny ekipa i Atita ary nanao fampisehoana teny an-dalambe sy nampianatra an'ireo tovovavy ao an-toerana mikasika ny fikorisana sy fanamboarana hazo fikorisana ho an'ny ho avy. Mampiseho ny fitetezantany ity horonantsary fohy ity.
Nipoitra tamin'ny lahatsary mozika ho an'ny “Vehivavy Voalohany (Alpha Female)” avy amn'ny tarika Britanika Wild Beasts ihany koa ny ekipa Girl Skate India.
Nanazava ny mpamokatra ny lahatsary, Sasha Rainbow:
Ao amin'ny toerana tahaka an'i Afghanistan, Kambodia, sy India, tsy nohamafisina ho fanatanjahantenan'ny lehilahy ny fikorisana, noho izany, nisy ny fiantraikany goavana ara-kolontsaina, mampianatra ny soatoavina momba ny fankaherezan-tena amin'ny alalan'ny fikorisana.
Afaka manjohy ireo tovovavy mpikorisa ao India ao amin'ny Facebook sy Instagram ianao.